Chelsea oo guul ka gaartay Atletico Madrid, Olivier Giroud oo ka caawiyay guusha
Home Champions League Chelsea oo guul ka gaartay Atletico Madrid, Olivier Giroud oo ka caawiyay...
Kooxda Chelsea ayaa guul ka gaaray Kooxda Reer Spain ee Atletico madrid lugta hore ee wareega 16-aad Champions league oo lagu ciyaaray Garoonka Arena Nationala,
Labada Kooxood ayaa kulankaan soo bandhigay ciyaar adag oo ku dhigan qaab difaac taasi oo keentay in labada koox ku kala nastaan goolal la’an qeybta hore ee ciyaarta iyadoo Chelsea ay u muuqatay mid weerar badan.
Qeybta danbe ayaana mar kale labada koox ay soo badhigeen ciyaar adag lakin wax walbo ayaa isbadalay daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta markii xidiga Olivier Giroud uu shaqaba ku hubsaday kubad qurux badan.
guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-1 taasi oo ka dhigan in Chelsea ay hal lug la gasho wareega xiga ee tartanka.
Chelsea ayaa kulankeeda xiga la ciyaaridoonta Manchester United Horyaalka Premier League halka Atletico madrid ay la ciyaaridoonta kooxda Villareal
Dhanka kale Kooxda Bayern Munich ayaa dhankeeda hal lug la gashay wareega xiga ee tartanka champions League kadib markii ay 4-1 ku xasuuqday kooxda Lazio oo garoonkeeda lagu ciyaarayay.
Previous articleKooxo badan oo isku heystaan in qaab xor ah ku helaan Aguero hadaba miyeey kooxdaada ku jirtaa.
Next articleFalanqaynta Kulanka Atalanta Vs Real Madrid ee Champions League